UJose Valenzuela uqeqesho lweenkampu zoqeqesho
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UDeiner Berrio, UJose Valenzuela, UValenzuela vs Berrio	0
UJose Valenzuela ngokuchasene noDeiner Berrio
Ukunyuka kwethemba elinobunzima UJose Valenzuela Uya kujonga ukubonakala kumnyhadala wakhe wokuqala wokubonakala xa ejongene neColombia UDeiner Berrio kumdlalo ojikeleze umjikelo we-10 osisihloko se-FS1 PBC Fight Night kunye nakwi-FOX Deportes ngalo Mgqibelo, nge-18 kaSeptemba (nge-7 pm ET / 4 pm PT) kwi-Arena yeMechanics Bank e-Bakersfield, California.
UValenzuela uthi: “Ndiphuphe ngalo mzuzu ndisemncinci. “Ngoku ndikulungele ukwenza umboniso ngoMgqibelo ebusuku kwaye ndenze ingxelo enkulu. Kufuneka ndazise icandelo lonke ukuba ndilapha. ”
Umntwana oneminyaka engama-22 ubudala uchukumise ukuphuma kwakhe okokugqibela, emisa uDonte Strayhorn kumjikelo wesine womlo wabo osasazwe kwi-FOX ngaphambi kwePacquiao ngokuchasene nokuhlawulwa kwe-Ugas nge-Agasti ka-21. ukubonisa isitayile sakhe esinoburharha, wabona amanqaku omdlalo wakhe apho anokuphucula khona.
"Ndiyakuthanda ukwenza umdlalo olungileyo kubalandeli kwaye ndibaphakamise ezihlalweni zabo," utshilo uValenzuela. “Ndingumlwi okhutheleyo, kuba ndikhule ndibukela kwaye ndithanda amajoni anjengoManny Pacquiao noJulio Cesar Chavez.
“Uza kubona iinyawo ezingcono kum kulo mlo. Ndiyimbethi manqindi elungileyo kwaye ndilungile ezinzwaneni zam, kodwa ngamanye amaxesha ndiyadikwa yile nto. Ndiyathanda ukulwa emseleni, kodwa ndiyazi ukuba kufuneka ndilumkile kwaye ndisebenzise ukuzikhusela kwam. Ndiza kusebenzisa i-jab yam kunye nee-angles ezahlukeneyo kulo mlo. Andizukuma nkqo phambi kukaBerrio. ”
UBerrio umele umlwi ophumeleleyo oye wajongana noValenzuela ukuza kuthi ga ngoku kubomi bakhe obutsha. U-Berrio oneminyaka engama-30 akakaze anqandwe kwaye kutshanje uphulukene nesigqibo esijikeleze u-10 sokungoyiswa u-Juan Pablo Romero ngo-Epreli. Ngaphandle kwesithuba kumava, uValenzuela ukholelwa ekubeni unomphetho kwi-ring ye-IQ eya kumnceda ukuba aphumelele.
"UBerrio unesitayile apho alwa khona ngonyawo lwangasemva, ehla aze agqabhuke ngamalungelo asendle," utshilo uValenzuela. Sisitayile esingaqhelekanga kwaye ngokuqinisekileyo sinomdaka kancinci. Andiqondi ukuba uya kuba nakho ukuziqhelanisa nokwenza uhlengahlengiso azakufuna ngakum. Ndiza kulindela iifoto ezininzi kuye. ”
Inzalelwane yaseLos Mochis, eSinaloa, eMexico, eValenzuela ngoku iqeqesha eSeattle, eWashington, apho iqeqeshwa khona nguJose Benavidez Sr. kunye noonyana bakaJose, intshatsheli yehlabathi engoyiswanga izihlandlo ezibini uDavid Benavidez kunye nosoloko elwa ixesha elide uJose Benavidez Jr.Valenzuela usebenze Intsapho yakwaBenavidez kule minyaka mine idlulileyo, bethatha ulwazi oluvela kusapho lwamanqindi olunempumelelo.
"Ngamava amnandi ukusebenza nosapho lakwaBenavidez," utshilo uValenzuela. Bahlala bendityhala nzima kakhulu kwaye bakholelwa ngokwenyani ukuba asinamda. UDavid ukwangumlo okhawulezayo ukuhamba kwaye ndicinga ukuba oku kuvela kuhlobo loqeqesho esilwenzayo. ”
Kwicandelo elinobunzima obunzima kunye neentshatsheli ezininzi kunye nabadlali, uValenzuela uyazi ukuba kufuneka asebenzise lonke ithuba alifumanayo. Olo lwazi luyamkhuthaza ukuba aqiniseke ukuba ujongeka enomdla nge-18 kaSeptemba.
"Kufuneka ndibonise wonke umntu ukuba uBerrio akakho ndawo kwinqanaba lam," utshilo uValenzuela. “Andinakuphumelela nje. Kuya kufuneka ndiphumelele ngendlela engummangaliso. Ukunkqonkqoza kungakuhle, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukulawula kwaye ujongeke uphumelele. ”
Umboniso wangoMgqibelo uzakulandelwa ngeCawa, nge-19 kaSeptemba ngobunye ubusuku bentshukumo ye-FS1 PBC Fight Night eyenzeka neMechanics Bank Arena eBakersfield, California. Usasazo lwangeCawa luqala ngentsimbi ye-10 pm ET / 7 pm PT kwaye iphambili entlokweni ye-super featherweight future Maliek Montgomery ejongene no-Aleem Jumakhonov kumlo we-10.
Amatikiti eminyhadala ephilayo, ekhuthazwa kukunyuswa kwe-TGB, athengisiwe ngoku kwaye ayafumaneka kwi-AXS.com.
Dibana neembaleki eziphambili ezithathe inxaxheba kwi-World Military Boxing Championship	I-7-0 ye-featherweight super uDaniel Bailey olandelayo eBoston ngoSeptemba 25